12inch fashion tiffany Mediterranean Ceiling Light Living Room Lights Bedroom Lamp - iTrivoshop ngo- $ 160.00
Ikhaya I-icon phansi icon Isitolo Samadili I-icon phansi icon 12inch fashion tiffany Mediterranean Ceiling Light Living Room Lights Bedroom Lamp - iTrivoshop
12inch fashion tiffany Mediterranean Ceiling Light Living Room Lights Bedroom Lamp - iTrivoshop
Inani langempela $ 256.00
Intengo yamanje $ 160.00
Igama Brand: DEEVOLPO
Ingabe Ama-Bulbs Ahlanganisiwe: Yebo
Inombolo yemithombo yokukhanya: 3
Indawo yokukhanyisa: Amamitha angu-10-15 ambalwa
Umthombo wamandla: AC
Ingabe iyayinciphisa: Cha
Uhlobo lohlobo: B15
Izinto zomzimba: iron
Izinto zomzimba: Glass
Shintsha Uhlobo: Shintsha igobongo
Umthombo Wokukhanya: Ama-bulbs we-LED
isitayela: Isitayela saseShayina
Material: Itshe Lezibuko
Inombolo Model: 220V
Faka isitayela: Izibani ezingaphansi
Engeza ukubuyekeza Buza umbuzo
Yiba ngowokuqala ukubhala a ukubuyekeza
Hmm ... akubonakali sengathi uthenge lo mkhiqizo okwamanje ukuze ukwazi ukushiya isibuyekezo.
Usuvele ubuyekeze lo mkhiqizo. Uma ungathanda ukuhlela ukubuyekeza kwakho okukhona sicela uxhumane nathi ngqo.
Kukhona okungahambanga kahle! Ngicela uzame futhi!
Uma unemibuzo, sicela usishiyele umugqa!